OCHA: Soomaaliya weli maaha meel lagu celin karo qaxooti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
OCHA: Soomaaliya weli maaha meel lagu celin karo qaxooti
6th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Nairobi – Mareeg.com: Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay adag tahay in waqtigan Soomaaliya dib loogu so celiyo qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan dalka Kenya iyadoo arimahaasi u sababeeysay in Somalia aysan weli xasilooneeyn.
Xafiiska Qarmada Midoobay ee arimaha bini’aadanimada OCHA ayaa sheegay warbixin cusub uu soo saaray in howlgallada ka bilowday Koonfurta iyo bartamaha dalka ay hakad galiyeen howlihii ku aadanaa in qaxootiga dib loogu soo celiyo Sooamaliya.
Digniinta xafiiska Qaramada Midoobay OCHA ee ku saabsan qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayuu ku sababeeyay in dalka weli aanay ka jirin nabadgelyo la isku halleyn karo, isla markaana qaxootiga haddii dib loo celiyo ay la kulmi karaan dhibaatooyin dhinaca nolosha ah.
OCHA waxa ay sheegtay in dagaalkii bishii March 2014 laga bilaabay gobolo la qorsheenayay in lagu soo celiyo qaxootiga ay hadda adagtahay in lagu soo dhiirado.
Hadalkan kasoo yeeray OCHA ayaa imaanaya kadib markii dowlada Kenya ay amar ku bixisay in qaxootiga Soomaalida dalkaasi ku sugan ay xerooyinkodi dib ugu laabtaan.
UN-ka ayaa waqti hore waxa ay sheegtay in la qorsheeyay in 50,000-qof oo qaxooti Soomaali ah dib loogu soo celiyo Somalia.
Wakaalaha gargaarka bani’aadanimo bixiya ayaa sheegay in faqriga, shaqa la’aanta iyo cuni yarida iyo biyo la’aanta ay ku sii baaheyso qaar ka mid ah gobolada dalka.
OCHA waxa ay sheegen in tusaale ahaan magaalada Baydhabo ay ka mid aheyd goobaha la doonayay in lagu soo celiyo qaxootiga.
Goobaha kale ee la qorsheeyay in qaxootiga lagu soo celiyo waxaa ka mid ah Kismaayo gobolka Jubada Hoose iyo degmada Luuq ee gobolka Gedo.
OCHA waxa ay diyaarisay 2663-qof oo qaxootiga Soomaalida ku sugan dalkaasi Kenya, waxaana Kismaayo loo diyaariyay qaxooti gaaraya 792, Baydhabo waxa loo diyaariyay 401 qof halka Luuqna loo diyaariyay 128-qof.
Gudoomiyihii degmada Kaaraan oo si awood ah xilka looga qaaday